Qala IJamani Journal Tenerife Umhlaba we-1000 ushiye iifasta
Umhlaba we-1000 ushiye iifasta
14. Julayi 2017
Ukuba ufuna i-finca e-Tenerife, yinto efanelekileyo yokuzibeka kwaye ungathembeli kubathengisi.
Izinto ezininzi zifumaneka xa zikhangele umhlaba.
Mhlawumbi kufuneka ungene kwiziko ngaphambili.
Kumele kucacile, omnye uthatha i-substance, yiphi uhlobo, umntu unokugqiba kuphela, ukuba umntu ukhona.
Kukho iingcali ezaneleyo eTenerife. Abanye sele bekwazi ukuzenza ngaphandle kweendonga ezimbalwa, ikhaya elincomekayo lomhlalaphantsi.
i-kasaan media, i-2017
Iimfucu eziliqela kwizigaba ezahlukeneyo zokwakha kunye nembono emangalisayo ukusuka entabeni ukuya elwandle
Shiya i-finca, kwindawo ethile ecaleni kwe-El Rio,
Finca rustica enombono omhle
Enye yezinto ezininzi eziye zalahla ezintabeni
Idiza lenzeke kwiTenerife
Ingozi yebhanana ye-Canarian
Indlu e Tenerife
Inqaku langaphambiliI-lobby yeNdlovu yaseAfrika
Inqaku elilandelayoPluto ne Charon